Umkhombandlela wokuLungiswa kweeNkcazo zokuSebenza Abavelisi kunye nabaThengi - umbane waseChina - i-Rihoo Industry
Ikhaya > Iimveliso > I-Roller Guide Rails > Izikhokelo zeNgcaciso
Oku kulandelayo malunga neeKhokelo eziHlangeneyo zeeNgcaciso eziKhuselekileyo, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde kakuhle i-Guide Edge Guide Rails.
Rihoo Izikhokelo zeNgcaciso RT series are made from carbon steel hardened to a minimum of 53 HRC, polished and oiled, or unhardened ( 22-25 HRC), as formed , oiled.
Kwakhona inokwenziwa ngensimbi engenasici iyancipha ibe yincinci ye-HRC engama-40, ipholile kwaye ifakwe ioli, okanye i-unhardened (20-23 HRC), njengoko yenziwe, ioliyile.
Ubuninzi bomda wobude obude ubude ukuya ku-4000mm ngokukhawuleza ukudibanisa ngokukhawuleza.
I-RT series Izikhokelo eziqhelekileyo zisetyenziswa ngokuqhelekileyo kunye neW Track Track.
Iifayile ezishisayo: I-Guide Edge Guide Rails, i-China, abenzi, abaxhasi, umveliso, ukuthengwa, ukuthengwa, okwenziweyo, umgangatho ophezulu, isaphulelo, ixabiso lentengo, ixabiso eliphantsi, isampuli yamahhala, isicatshulwa